Snapdragon 8 | နှင့်အတူ Galaxy Note 836 သည်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည် Androidsis
Galaxy Note 8 သည် Snapdragon 836 နှင့်အတူပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည်
Galaxy Note 8 ရှေ့ပြေးပုံစံ (DBS Designing)
Samsung သည်လအနည်းငယ်အကြာတွင်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာရန်မျှော်လင့်ရသည်။ အထူးသဖြင့်မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းပေါက်ကြားမှုများစွာတွင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Galaxy Note 8 ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် terminal တွင်နောက်ထပ်ပရိုဆက်ဆာအသစ်တစ်လုံးအသုံးပြုနိုင်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ၈၃၆ ။
Processor အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် web ပေါ်၌ပေါ်ထွက်လာပြီး Qualcomm မှအတည်မပြုရသေးပါ။ သို့တိုင်မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလာမည့် Samsung ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်ကြောင်းအစီရင်ခံစာအသစ်တစ်ခုကထောက်ပြခဲ့သည် Snapdragon 836 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးမျိုးသောတိုးတက်မှုများနှင့် Snapdragon 835.
Galaxy Note 8 ကို Qualcomm ပရိုဆက်ဆာအသစ်နဲ့တွေ့ရင်တောင်မှမြောက်ကိုရီးယားကထုတ်လုပ်သူတွေလိုစဉ်းစားတာကတော်တော်အဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မယ် Snapdragon 835 တွင်ယာယီသီးသန့်ထားရှိသည် ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာပေါ့၊ ဒါ့အပြင်အချို့သော Premium မိုဘိုင်းဖုန်းများ el LG က G6သူတို့သည် Snapdragon 821 နှင့်အတူရောက်လာသည်.
Snapdragon 8 ကိုပထမဆုံး Galaxy Note 836 မှာတွေ့ရမယ်
Snapdragon 836 သည်ရေတွက်နိုင်သည် Snapdragon 835 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုးတက်မှုအမျိုးမျိုး, လက်ရှိ Galaxy S8 နှင့် S8 + ဖုန်းများတွင်ပါရှိသောပရိုဆက်ဆာအပြင်အခြားသူများ။ ပလက်ဖောင်းတစ် ဦး ပရိုဆက်ဆာရှိသည်လိမ့်မယ် 2.5GHz မှာရှစ် core ကိုSnapdragon 2.45 ၏ 835GHz နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 740MHz မှာဂရပ်ဖစ်ယူနစ်.
Galaxy Note 8 သည် Samsung ၏ SoC အသစ်ကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့်စက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နောက်မှဖြစ်သည် LG က V30 နှင့်အကွာအဝေးအတွင်းရှိလာမည့် devices များ Google က Pixel.
တိုးတက်လာသောပရိုဆက်ဆာထည့်သွင်းထားခြင်းအပြင်၊ Galaxy Note 8 သည်လည်းပါရှိလိမ့်မည် ကင်မရာနှစ်ခု အနောက်ဘက်မှာ 3200mAh ဘက်ထရီပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မကြာသေးမီကလည်း Note 8 အသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ဖန်သားပြင်သို့လက်ဗွေစာဖတ်သူကိုရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မယ်Samsung သည်၎င်းနည်းပညာအသစ်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်ပြproblemsနာများကိုစက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ၆.၃ လက်မအရွယ် Infinity Display နှင့် ၁၈: ၉ ရှုထောင့်အချိုးအစားတို့ဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ကိုထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ IFA 6.3 မတိုင်မီသြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုစက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင်နောက်ဆုံးထွက်နိုင်သည့်ကောလာဟလများအရသိရှိရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Galaxy Note 8 သည် Snapdragon 836 နှင့်အတူပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည်
Xiaomi Mi6၏ကင်မရာသည်အသုံးပြုသူများအားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောလုပ်ဆောင်မှုကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်
Samsung ၏ Secure Folder ကို Play Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သည်